Suuqgeynta Cusub ee Hawl -wadeennada Dalxiiska Tansaaniya si ay u soo jiitaan Doollarka Dalxiiska
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Tansaaniya » Suuqgeynta Cusub ee Hawl -wadeennada Dalxiiska Tansaaniya si ay u soo jiitaan Doollarka Dalxiiska
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Wararka Tansaaniya • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Madaxa Ururka Hawl -wadeennada Dalxiiska Tansaaniya, Sirili Akko
Ururka Dalxiisayaasha Tansaaniya (TATO) ayaa xusayay Maalinta Dalxiiska Adduunka iyagoo ugu baaqay ciyaartoyga silsiladda qiimaha dalxiiska oo dhan inay si firfircoon uga qaybqaataan dadaalkeeda adag si ay u arkaan inaan cidina ka hadhin maadaama warshaduhu bilaabeen inay dib u soo noqdaan.
TATO waxay had iyo jeer ka shaqeyneysaa sidii ay u dejin lahayd tillaabooyin deg -deg ah oo gacan ka geysanaya soo nooleynta dalxiiska ee ay hoos u dhacday dhibaatada coronavirus.
Ururku wuxuu keenay wakiilo safarro caalami ah oo muhiim ah Tansaaniya si ay u sahamiyaan oo ay ula kulmaan quruxda dalka.
Dadaalladii ugu dambeeyay ayaa ah in kor loogu qaado umadda sidii meel nabdoon iyada oo ay jirto masiibada COVID-19.
“Maaddaama adduunku uu mar kale furmayo, oo rajada dalxiisku ay u muuqato mid dhalaalaya, waxaan jeclaan lahaa inaan ku boorriyo dhammaan daneeyayaasha inay isu soo taagaan sidii ay uga mid noqon lahaayeen warshadaha,” ayuu yiri Maamulaha TATO, Mr. Sirili Akko, oo ka hadlayay telefishanka gaarka loo leeyahay ee Tansaaniya. show oo qayb ka ah maalinta dalxiiska adduunka fête.
Isaga oo ka hadlaya mawduuca sannadka 2021, Dalxiiska Kobcinta loo dhan yahay, Mr. Akko wuxuu sheegay in TATO ay shaqeyneyso habeen iyo maalinba si ay u dejiso tallaabooyin deg -deg ah oo gacan ka geysanaya soo nooleynta dalxiiska ee ay hoos u dhacday dhibaatada coronavirus si looga wada faa'iideysto.
“Annaga oo ah darawallada waaxda gaarka loo leeyahay oo wadashaqeyn dhow la leh UNDP iyo dowladda, waxaan go’aansannay inaan horumarinno tallaabooyinka soo -kabashada dalxiiska. Kuwaas waxaa ka mid ah soo celinta kalsoonida socotada iyada oo la tallaalo dhammaan shaqaalahayaga safka hore, in la duubo xarumaha ururinta muunadda COVID oo ku habboon jardiinooyinka qaranka, la geeyo ambalaasyada casriga ah, iyo in dib looga fikiro xeeladaha suuqgeynta ee dhererka dhibaatada COVID-19, Ayuu yidhi.
Runtii, TATO waxay keentay wakiilo safarro caalami ah oo muhiim ah Tansaaniya si ay u sahamiyaan oo ay u la kulmaan quruxda waddanka dadaalladii ugu dambeeyay ee lagu dhiirrigelinayo ummaddu inay tahay meel aamin ah inta lagu jiro masiibada COVID-19, oo ku dhufatay suuqyada ilaha dalxiiska ee muhiimka ah.
TATO, fikrad ka dhigaysa suuq -geyn iyo dareen dhaqaale oo aad u badan ayaa ah in la keeno wakiillada socdaalka si ay wax uga ogaadaan meelaha dalxiiska dabiiciga ah ee dalku leeyahay marka loo eego in hawl -wadeennada dalxiisku ay raacaan dibedda iyaga oo wata sawirro socda oo socda.
Kooxdii ugu horreysay ee wakiilo socdaal oo Mareykan ah, kuwaas oo soo afjaray socdaalkoodii sahaminta dalka, ayaa ku sugnaa Caruusha, oo ah caasimadda safari ee loo qoondeeyay; Beerta qaranka ee Lake Manyara; Godka Ngorongoro, oo loogu magac daray Beerta Ceeden ee Afrika; Seeraha qaranka ee Serengeti si loo arko socdaalka duurjoogta ee haray; iyo Buurta Kilimanjaro, oo lagu tilmaamo saqafka Afrika.
Tani waxay imaaneysaa xilli warshadaha dalxiiska ay wajahayaan caqabado u gaar ah, taasoo ku qasbeysa hawlwadeennada dalxiiska inay isku dayaan inay kala duwanaadaan istiraatiijiyadooda suuq -geynta si ay u soo jiitaan booqdayaal badan isla markaana kor ugu qaadaan tirooyinka dalxiiska si ay uga badbaadaan weerarada halista ah ee ka imanaya meelo kale oo leh jiidasho la mid ah imaatinka Cudurka caalamiga ah covid19.
Falanqeeyayaasha warshadaha dalxiiska ayaa sheegaya in dadaalku uu tilmaamayo isbadal taariikhi ah oo ku wajahan istiraatiijiyadda suuqgeynta, maadaama dhaqan ahaan habka hawl wadeennada dalxiiska loo weeciyay dhanka u safridda dibadda si kor loogu qaado meelaha dalxiiska ee dalku u hibeeyay heer aad u weyn.
Aafadu waxay khatar gelisay silsiladda qiimaha dalxiiska oo dhan, waxay abuurtay xaalad halkaas oo hab dhaqameedka isgaarsiinta iyo wada shaqeynta ay ugu sii wareegi karto dhanka dijitaalka marka loo eego siyaabaha iyo hababka jir ahaaneed, wuxuuna muujiyey cilladaha ka iman kara xagga ganacsiga.
Intaas waxaa sii dheer, Dalxiiska Tansaaniya waxay u baahan tahay inay maraan fursadaha iyo caqabadaha ay soo bandhigeen tixgelinno kala duwan oo bulsho, deegaan, iyo siyaasadeed.
TATO, oo ah urur ganacsi oo xubin ka ah oo dhiirrigeliya dalxiiska oo wanaagsan, ayaa sidoo kale door ka ciyaaraya isku xirka meheradaha iyo shaqsiyaadka ku jira ganacsiga si loo fududeeyo wadaagga aqoonta, dhaqanka ugu wanaagsan, ganacsiga, iyo isku xirka warshadaha oo dhan.
George Tarimo, oo ah guddoomiyaha farsamo-gacmeedyada yaryar ee Suuqa Maasai ee Arusha, ayaa sheegay in masiibada COVID-19 ay bixisay cashar ku saabsan baahida loo qabo in la helo is-dhexgalka silsiladda qiimaha dalxiiska Tansaaniya.
September 30, 2021 at 08: 40
Miyaad rabtaa inaad sare u qaaddo miisaaniyadda suuqgeynta oo aad ballaariso saldhigga macmiilkaaga? Ganacsiga safarku wuxuu gacan ka geysan karaa furitaanka suuqyo cusub, soo jiidasho booqdayaal badan Shirkadaha safari ayaa sidoo kale u baahnaa inay soo jiitaan dalxiisayaasha astaanta dalxiiska iyo shirkadaha dalxiiska oo xoogga saaray suuqgeynta inay matalaan.